Sameynta Badbaadinta Disney Vacation
Mareykanka California Disneyland
Wakiilada safarka waxay samayn karaan ballamada Disney parks cinwaanka
Waxaan ahay taageere Disneyland ah oo jecel booqashada carruurteyda laakiin xitaa sida qoraaga iyo booqdaha joogtada ah ee helitaanka wargeysyada iyo meelaha baabuurta la dhigto, ma garanayo wax walba oo ay ka ogaanayaan Disneyland Resort - Walt Disney World, Waan ogahay xittaa wax yar, sida aan ku soo bandhigay booqashadayda halkan todobaadkii ina dhaafay. Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo. Haddii aad iibsato tikidhada qaar, u dalbo hoteel iyo jet si aad Orlando, Fla., Waxaad u badan tahay inaad haysatid wakhti fiican, laakiin waxaad u maleyneysaa in aad wax badan ka badan tahay inaad qayb ka ahayd.
Gali wakiilka socdaalka. Wakiilada safarka ee iibiya Disney waxay ogaanayaan wax walba oo ay ka og yihiin beeraha. Waxay yaqaanaan wax ku saabsan shaaha princess at Hotel Grand Floridian. Waxay ogaadaan marka xafladaha Cunnada & Wine ay ku yaalaan Epcot. Waxay kuu sheegi doonaan, haddii carruurtaadu yihiin xoolo jecel, waa inaadan seegin Boqortooyada Ingiriiska ee Disney.
Waxaa jira wax badan oo ka jira WDW iyo Parks Disneyland in, haddii aad tahay degaan aadna booqanayso si joogta ah, qorsheynta safarka mid ka mid ah jardiinooyinka waa ballanqaad weyn - dabcan waxaad rabtaa inaad hesho mid sax ah.
Wakiilka safarka Debby Summerlin ayaa ku talinaya isticmaalka wakiilka waqti go'an. Waxay tilmaameysaa in ay bakhtiin karto hawo, hoteelo, tikidhada jimicsiga iyo jadwalka jadwalka, abuurista masruuf ku haboon adiga oo aanad samaynin mid ka mid ah qaadista culus.
Summerlin waxay sidoo kale xusuusataa in ay jiraan waxyaabo badan oo kala duwan oo ku saabsan safarka Disney oo uusan raqiis ahayn. Waxay aaminsan tahay in ay ugu fiican tahay in ay ka tagto dhammaan qorshaynta xirfadle.
Isticmaalka wakiilka safarka wax lacag ah ma bixinayo, dhab ahaantii, waxay xitaa xitaa kaa badbaadin kartaa lacag. Hotel, tikidhada iyo duullimaadyada ayaa laga yaabaa inay soo baxaan qurux badan xitaa wakiilka socdaalka. Hase yeeshee, waxqabadyada ballansashada horay waxay u sameeyaan waxyaabo badan oo jaban
Waxaa intaa dheer, haddii aad u tagto khubarada, ma aad iman doontid baarkinka oo aad wakhti aad ku ogaanaysid waxaad rabto inaad sameyso.
Wakiilada safarku waxay wax walba u diyaarin doonaan horay loo qorsheeyey adiga.
Waa kuwan saddexda tusaale ee waayo-aragnimo ee wakiilka socdaalka uu kuu dalban karo:
Khibradaha cuntada. Weli wuxuu isku dayay inuu ku soo galo Blue Bayou? Waxay ahayd mid ka mid ah makhaayadaha ugu caansan ee Disneyland muddo dheer. Waxaad samayn kartaa boos celin Disney oo hore u sii diyaargarow oo kaliya soojiid wakhti go'an, walaaca ama waqti wakhti gaaban ka codsanaya marti-gelinta miis fadhiya booqashadaada.
Bippity Boppity Boutique Waxaad ku socotaa Disneyland waxaadna aragtaa gabadha sharafta leh iyo amiiradaha quruxda badan oo lagu soo dabaasho park. Waxaad u malayn kartaa inay sidaas sameeyeen guriga, laakiin waad la yaabi lahayd si aad u ogaatid inay booqdeen Bippity Boppity Boutique oo waxay leeyihiin hanta madax-ilaa-lugo. Bustada waa mid aad u caansan sidaa darteed boosasku waa qiyaastii waa - gaar ahaan marka beerta la isugu yimaado.
Tea-Madoobe oo ah Grand Floridian. Qolalka Shaaha ee Jardiinada ee Grand Floridian Resort & Spa waxay bixisaa shaah weyn oo shaah ah, Shaahda Disney Perfect Princess, oo ay ku jiraan muyuusig, qoob ka ciyaarka, sheeko xambaarsan iyo waxyaabo kale oo badan oo ku saabsan shaah. Waxaa xitaa booqasho ka yimid Princess Aurora. Ka qaybgalayaashu waxay helayaan hadiyado siyaado ah, oo ay ku jiraan 18-inch My Disney Girl oo dhar u ah dharka Aurora, tiara ah gabadha, gabadha dahabka ah, jilbaha princess, gogol cusub, gabar shahaadada gaarka ah "Prost Friend" oo ah shahaadadooda cusub.
Amiirradu waxay seefahooda ka qaadaan seef, iyo gaashaan, iyo luul, iyo cadho. Shaaha waxaa la qabtaa oo kaliya maalinta subxaanta ah, isla markaana waxaa la dhigan karaa 180 maalmood kahor.
Soarin 'Around the World waa mid ka mid ah dariiqyada ugu fiican ee Disney
Hagaha Waalidka ee Hagaha Disneyland
Disneyland Resort Hotels ee California
West Nile Virus ee Giriiga
Monticello: Guriga Taariikhda ee Thomas Jefferson
South Bank Beach iyo Aquatic Playground
Cuntooyinka qoyska ee Sergio
Xeebta Nevada Beach ee Lake Tahoe
Sida Loo Isticmaalo Sawirada Wanaagsan ee Gaadiidka
Terra Botanica Parc ee Angers, Faransiiska
Hagaha Stanley Park Gardens ee Vancouver
Taariikhda Waqooyiga Hong Kong
Waxyaabaha xiisaha leh ee Cheyenne, Wyoming
Beerka iyo Beeraha ugu Fiican Washington, DC
Dhacdooyinka Maalmaha Hawlgabka Maaliyadaha iyo Dalabaadka Albuquerque
Lacagta Milatariga iyo Hawlgabka Veterans ee Washington DC